DAAWO SAWIRO : Maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay fulinta amarkii ROOBLE | Warkii.com
Home warkii DAAWO SAWIRO : Maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay fulinta amarkii ROOBLE
Maamulka gobolka Banaadir oo ka duulaya amarkii ka soo baxay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay bilaabay inay biyaha ka saaraan waddooyinka xirmay ee magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa xalay kormeeray jidadka muhiimka ah ee caasimada oo saameyn ay ku yeesheen roobabkii da’ay 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Sidoo kale maamulka gobolka ayaa durbo bilaabay inay biyaha ka dhuuqaan meelaha ay fariisteen, iyaga oo isticmaalyo booyado, taas oo qeyb ka aheyd amarkii Rooble.
Axmed Xasan Iimaan oo haatan ah ku simaha duqa magaalada Muqdisho, ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaar ka mid ah jidadka ay ka dhuuqeen biyaha degay, wuxuuna intaasi ka daray in ay sii laba jibaari doonaan dadaallada ay haatan wadaan.
Sidoo kale Imaan ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho inay isku gurmadaan, si loo caawiyo dadka danta yar ee ku dhibaateen gudaha caasimada.
Shalay ayey aheyd markii ra’iisul wasaare Rooble uu isugu yeeray mas’uuliyiinta gobolka Banaadir, isaga oo kala hadlay saameynta ka dhalatay roobabkii ka da’ay Xamar, wuuna faray ra’iisul wasaaruhu inay si deg-deg ah u furaan waddooyinka muhiimka ee xirmay.
Previous articleDAAWO Sawirro: Golaha wasiirada oo shir xasaasi ah ku leh garoonka Aadan Cadde
Next articleCali Xuseen oo ‘lagu dilay’ qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Armenia ayaa Sabtidii sheegtay in, in ka badan laba kun oo askari looga dilay dagaalkii socday lixda toddobaad ee ay la gashay Azerbaijan,...
Itoobiya oo ku raadjoogto hogaamiyayaashii TPLF iyo Debretsion oo hanjabaad hor...